कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन ? – हिमालयन ट्रिबुन
कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन ?
खेल क्षेत्रको विकासका लागि बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बिहीबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई २ अर्ब ३६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराएका हुन् । खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुनसक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन र सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको गरेको छ । । यसैगरी गतवर्षकै कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने योजनालाई निरन्तरा दिइएको छ । यस्तै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सिंचाइ आयोजनालाई बजेट
सरकारले महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट उक्त आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई रणनीतिक महत्वको आयोजनाका रुपमा समेत हेरिने गरेको छ । उनले जलविद्युत आयोजनलाई निर्माणलाई आगामी आर्थिक बर्ष पनि तिव्रता दिने जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय प्रणालीमा १३ सय मेगावाट विद्युत् थपिने बताए ।
यस्तै, माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, तामाकोसी–५, चेनपुर सेती लगायत आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । उनले काठमाडौंबाट सुरू भएको विद्युतीय तार भूमिगत कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । खतिवडाले आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर, चितवनमा लगायतका ठूला सहरमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिने लगायत ठूला सहरमा विस्तार गरिने बताए । गरीब र विपन्न परिवारले विद्युत जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्शन व्यवस्था मिलाइदिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । खतिवडाले देशका सबै परिवार लागि ऊर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो योजना ल्याएको बताए ।
यसका साथै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउँदै उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकेर पानी काठमाडौँवासीलाई वितरण गर्ने बताए । मेलम्चीको सो आयोजना सक्नका लागि ५ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । तीनै तहबाट संचालित खानेपानी आयोजना २ बर्षमा सम्पन्न गरेर ९४ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानी सुविधा व्यवस्था गर्ने उनले बताए । तराई मधेशका सुख्खा क्षेत्रमा पम्पिङ व्यवस्थाबाट खानेपानीका लागि ५ अर्ब बजेट छ्ट्याएको खतिवडाले बताए ।
पूर्वाधार विकासका लागि बजेट
सरकारले भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशमा २ राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी काम अगाडी बढाइने घोषणा गरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको विस्तारको लागि १२ अर्व २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निमार्णको लागि ८ अर्व २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी ३ वर्षभित्र सक्नको लागि आगामी वर्षको लागि ७ अर्व १ विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग लाई ५ वर्षमा सक्ने गरी ३ अर्व ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–मधेश द्रुर्त मार्ग ३ वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ८ अर्व ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगमी वर्ष उक्त सडकमा पर्ने जटिल पुल तथा सुरुङको निमार्ण कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लागि १ अर्व ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले नारायणी, कोशी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए । नेपालको ध्वजाबाहक पानीजहाजको भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गर्ने उहाको भनाई छ । उहाले भूकम्पपछिको पूननिर्माणलाई तिव्रता दिइने बताए । उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा योजना छनौट गरिने कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शैय्याको सरुवारोग अस्पताल बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका गरेका हुन् । त्यस्तै उनले सबै प्रदेशमा दुई सय शैय्याको अस्पताल बनाइने बताए । स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणासमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँच लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने बताए । हरेक प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसलगायत संक्रामक रोग र अरु रोगसँग लड्दै जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताए ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका लागि ६७ अर्ब ५० करोड रुपैया विनियोजन गरेको बताए । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र आहात बने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नगरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । वृद्ध, अशक्त, एकल महिला लगायतले सामाजिक भत्ता पाउनेछन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकलाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै ४ लाख विपन्न परिवारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेगरी बजेटको व्यवस्था गरेको बताए । गरिब परिचयपत्र वितरण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै यस कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए ।
सरकारले कृषि वाली तथा पशुपक्षी बीमाको दायरा थप विस्तार गरि जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा बृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भए पछि तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष बाली तथा पशुपंछी विमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने विमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा यसको दायरा थप गरिएको खतिवडाले बताए । उनले कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने व्यवस्था गरेको बताए । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारले फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले ३ सय स्थानीय तहमा भूमी बैंक स्थापना गरिने बताउनुभयो । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।